AC Milan oo guul weyn ka gaartay Juventus oo labo gool la horreysay, xilli Ronaldo iyo Ibrahimovic ay shabaqa soo wada taabteen… + SAWIRRO – Gool FM
(Milano) 07 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guul weyn oo ay u qalantay ka gaartay Juventus oo marti u ahayd, isla markaana la horreysay labo gool, kulan lix gool la iska dhaliyey qeybta labaad ee ciyaarta.
Kulankan ayaa qeybtii hore la isku mari waayey, waxaana lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0 ah inkastoo ay labada dhinac fursado goolal loo filan karay sameeyeen.
Qeybtii labaad ee ciyaarta Juventus ayaa goolasha la horreysay waxaana goolka hore u dhaliyey 47’daqiiqo Adrien Rabiot, waxaana uu ahaa gool gantaal ahaa oo uu ugu shubay kaddib markii uu iska dhex jeexay xiddigaha Milan.
Cristiano Ronaldo ayaa goolka labaad oo ay Juve hoggaanka ku dheereysatay u dhaliyey, waxaana uu ka faa’iideystay kubbad ay daafacyada Milan isku qaldeen oo uu gadaashooda ka qaatay waana ugu shubay kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-0 looga gacan sarreeyey Milan.
Wixii markaa ka dambeeyey Milan ayaa hurdada ka toostay, waxaana ay weerar ku qaadeen Juve, iyagoo helay gool ku laad, kaddib markii mid ka mid ah xiddigaha Juventus uu kubadda gacanta ku taabtay isagoo ku jiray xerada ganaaxa rigooradaasna waxaa gool u rogay 62’daqiiqo Zlatan Ibrahimovic oo kulanka ka dhigay 2-1 weli looga gacan sarreeyey Kooxdiisa.
Milan ayaa kulanka barbaro ku soo celisay isla daqiiqaddii 66′-aad waxaana kubbad uu caawinteeda lahaa Zlatan Ibrahimovic si qurux badan shabaqa u gaarsiiyey Franck Kessie oo kulanka ka dhigay barbaro 2-2.
67’daqiiqo Rafael Leao ayaa hoggaanka u dhiibay Milan kaddib markii uu ka faa’iideystay kubbad ka faa’iideysi ahayd oo uu garsoorku fasaxay, waxaana uu kulanka ka dhigay 3-2 looga gacan sarreeyey Juve.
Laakiin wax waliba waxa ay isku dhammaadeen oo Juventus waagu ku baryey markii 80’daqiiqo uu Ante Rebic ka dhaliyey goolka afaraad, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 4-2 lagu cabay Juve.
Kooxda Juventus waxa ay hoggaanka u haysaa horyaalka Serie A, iyadoo leh 75-dhibcood, halka Milan ay soo degtay kaalinta shanaad iyadoo leh 49-dhibcood.